IGTV သည် YouTube ဆန့်ကျင်ရေးပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက် Instagram application သစ်ဖြစ်သည် Gadget သတင်း
IGTV, သင်ဤနာမ၌တည်နေကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လာမည့်လများအတွင်းကဏ္sectorတွင်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်မည့်ဗီဒီယိုဖိုင်တွင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများဖန်တီးရန်အတွက်အနာဂတ်ပလက်ဖောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည်။ Instagram သည်မိခင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် IGTV; တစ်နည်းပြောရရင်တော့: Instagram ကို TV က.
ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကိုယ်တိုင်စင်ပေါ်သို့တက်ခဲ့ပြီးမိနစ်အနည်းငယ် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂၀ ခန့်ခန့်) ကိုတင်ပြရာတွင်သူသည်သူတို့ရရှိခဲ့သည့်အောင်မြင်မှုကိုမြင်တွေ့ပြီးနောက်လောင်းကစားလိုသည့် platform အသစ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ Instagram ကိုဇာတ်လမ်းများ။ ထုတ်ကုန်အသစ်အားပေးသောအမည်မှာ IGTV ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဗွီဒီယိုပုံစံဖြင့်အကြောင်းအရာများစားသုံးရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုအဖြစ်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Instagram သည်မိုဘိုင်းအတွက်မွေးဖွားခဲ့သော application ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် IGTV အတွေးအခေါ်ကိုလည်းအလားတူချဉ်းကပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် Kevin Systrom သင်ပေးတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုမင်းတို့ပြောပြမယ်။ လူငယ်များသည်ရုပ်မြင်သံကြားမှအကြောင်းအရာများလျော့နည်းသည် (၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းသည်)၊ သုံးစွဲမှုသည်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့ရွေ့လျားသွားပြီး ၆၀ ရာနှုန်းတိုးသည်.
ထိုနည်းတူစွာပင် Instagram ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းထိုပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည် အင်တာနက်ပေါ်မှသုံးစွဲသူသန်း ၁၀၀၀ အထိရှိသည် နှင့်ကြီးထွားလာရပ်တန့်မထားဘူး။ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း IGTV ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်လည်းမွေးဖွားခဲ့သည် (ပထမဆုံးမိုဘိုင်း) ။ ပြီးတော့လက်ကိုင်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ဖို့သဘာဝနည်းလမ်းကဒေါင်လိုက်ဖြစ်တယ်။
IGTV သည်ဖန်တီးသူများသည်ဗီဒီယိုများကိုအများဆုံးနာရီအထိကြာအောင်ဆက်တိုက်ဖွင့်နိုင်သည်။ အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရန်စိတ်မပူပါနဲ့။ သင်၏ platform သည်သင်၏ Instagram အကောင့်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင်အကောင့်များစွာကိုစီမံသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လျှင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုဗွီဒီယိုများကို Instagram TV သို့တင်ပို့နိုင်သည်။ ထိုအတူတူပင်အတွက်သူတို့ကိုလောင်ရန် app ကို Instagram တွင်၊ ပလက်ဖောင်းအသစ်၏အိုင်ကွန်ဖြင့်ခလုတ်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသင်အကြိုက်ဆုံးဖန်တီးသူများမှဗွီဒီယိုအသစ်တင်သောအခါသင်အမြဲတမ်းအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ IGTV ကို iOS ရော Android အတွက်ပါရနိုင်သည်.
IGTV: Instagram ဗီဒီယိုအခမဲ့
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » IGTV, ဤသည် YouTube ကိုယှဉ်ပြိုင်ရန် Instagram application တစ်ခုဖြစ်သည်